FAQs - Xhosa - RAF Buddy
IMIBUZO ESOLOKO IBUZWA QHO
Siyaqonda ukuba azikho izihlo ezimbini ezifanayo. Ukuphendula eminye imibuzo onokuba unayo sihlanganise uluhlu lwemibuzo eqhelekileyo esoloko sibuzwa yona. Khumbula kwakhona, sikude kuwe kangangeklikhi okanye umnxeba ukuze ufumane olunye ulwazi onokuludinga.
Yintoni iNgxowamali yeeNgozi zeNdlela?
INgxowamali yeeNgozi zeNdlela (RAF) ibonelela ngekhava kubo bonke abasebenzisi bendlela abangabemi baseMzantsi Afrika (abemi kunye nabemi bamanye amazwe) abenzakeleyo okanye abaswelekelwe ngumntu abamthandayo ngenxa yengozi yemoto ngaphakathi kwemida yaseMzantsi Afrika.
Ngubani ofanelekileyo ukuba afake ibango kwiNgxowamali yeeNgozi zeNdlela?
Nabanina owenzakele kakhulu kwingozi yemoto kwaye ingenguye yedwa unobangela wengozi anganethemba elifanelekileyo lokuphumelela kwebango kwiNgxowamali yeeNgozi zeNdlela.
Irhafu yamafutha inxulumene njani neNgxowamali yeeNgozi zeNdlela?
INgxowamali yeeNgozi zeNdlela (RAF) ixhaswa ngezimali yirhafu yesizwe yamafutha kwaye yasekelwa injongo eyodwa yokubonelela amaxhoba engozi zendlela ngeyona khava yakhe yabanzi, ukuba benzakele ngaphakathi kwemida yoMzantsi Afrika.
Isebenza njani iNgxowamali yeeNgozi zeNdlela?
INgxowamali yeeNgozi zeNdlela ibonelela ngembuyekezo yoku kulandelayo: iindleko zonyango ezisisiphumo sengozi yemoto, iindleko zomngcwabo kwimeko apho ukufa kubangelwe yingozi yesithuthi okanye ukulahlekelwa yinkxaso, ukuba umboneleli ngengeniso oyintloko yekhaya uswelekile okanye wenzakele kakhulu kwaye oko kusisiphumo sokungakhathali komnye umqhubi. Imbuyekezo iza kuhlawulwa yiNgxowamali yeeNgozi zeNdlela kuphela ukuba ofake ibango angabonisa ukuba ngomnye umntu onokubekwa inxalenye yetyala okanye alibekwe ngokupheleleyo njengonobangela wengozi yesithuthi.
Ingaba abakhweli bebhayisekile bangalifaka ibango kwiNgxowamali yeeNgozi zeNdlela?
Abaqhubi, abakhweli, abahambi ngeenyawo, abakhweli beebhayisekile kunye nabaqhubi bezithuthuthu bonke bangafaka amabango kwiNgxowamali yeeNgozi zeNdlela. Oku kusebenza xa bengenguye unobangela wengozi ngokupheleleyo kwaye ukuba umntu obangele ingozi ibingumqhubi wesithuthi esihamba ngamafutha okanye idizili.
Ingaba iNgxowamali yeeNgozi zeNdlela iyababonelela abemi bamanye amazwe?
Ewe, iNgxowamali yeeNgozi zeNdlela iyababonelela abemi bamanye amazwe ukuba ingozi yenzeke ngaphakathi kwemida yaseMzantsi Afrika.
Ingaba iNgxowamali yeeNgozi zeNdlela iyakuhlawulela ukusweleka?
INgxowamali yeeNgozi zeNdlela ibuyekeza iintsapho ngokulahlekelwa yinkxaso kwimeko apho kusweleke umboneleli ngengeniso oyintloko yekhaya. Ungafaka ibango lembuyekezo ngeendleko zomngcwabo.
Ingaba ndidinga ukuba nephepha-mvume lokuqhuba ukuze ndifake ibango kwiNgxowamali yeeNgozi zeNdlela?
Hayi. INgxowamali yeNgozi zeNdlela inomdla kulowo ubekwa ityala lengozi kwaye nokuba ungunobangela wengozi kangakanani. Umntu oqhuba engenalo iphepha-mvume lokuqhuba akajongwa njengomntu ongakhathaliyo. Umqhubi ongenalo iphepha-mvume lokuqhuba usenakho ukufaka ibango lembuyekezo kwiNgxowamali yeeNgozi zeNdlela.
Ingaba ndifanelekile ukuba ndilifake ibango kwiNgxowamali yeeNgozi zeNdlela ukuba bendisemsebenzini ngexesha lengozi?
Ukuba wenzakele kwingozi yemoto lo gama usemsebenzini, uyakwazi ukufaka ibango kwiNgxowamali yeeNgozi zeNdlela nokuba ibango lokwenzakala usemsebenzini lifakiwe nakwiWCC.
Ndingakwazi ukufaka ibango kwiNgxowamali yeeNgozi zeNdlela egameni lomntwana ukuba andinguye umzali omzeleyo loo mntwana?
Ngutata okanye umama ozele umntwana onokufaka ibango egameni lomntwana. Abazali abangabazalanga abantwana koko bengabazali abonyulwe yinkundla, bangafaka ibango kuphela ukuba banesiqinisekiso esifunekayo okanye umyalelo wenkundla.
Ingaba ndivumelekile ukufaka ibango kwiNgxowamali yeeNgozi zeNdlela ukuba ingozi yenzeke kwelinye ilizwe?
INgxowamali yeeNgozi zeNdlela iza kuhlawula amabango afakwe ngabantu apho iingozi zenzeke ngaphakathi kwemida yaseMzantsi Afrika.
Ndiyakwazi ukufaka ibango kwiNgxowamali yeeNgozi zeNdlela ukuba andinguye ummi waseMzantsi Afrika?
Ingxowamali ibonelela ngekhava kubemi baseMzantsi Afrika kunye nabemi bamanye amazwe ababandakanyeke ezingozini kwiindlela zaseMzantsi Afrika.
Ndisenza njani isicelo sokufaka ibango kwiNgxowamali yeeNgozi zeNdlela
Kukho iinkqubo ezingundoqo ekufuneka zilandelwe xa kufakwa ibango kwiNgxowamali yeeNgozi zeNdlela. Amaxwebhu afunekayo aquka kodwa awaphelelanga apha: iinkcukacha ezisisiseko, iinkcukacha zengozi, izithuthi nabantu ababandakanyekayo, isixamali osibanga njengomonakalo, njalo njalo. Ingxelo kagqirha, ekhatshwa yingxelo efungelweyo neengxelo zamapolisa, iinkcazelo zamangqina, kunye nobunye ubungqina buyafuneka ukuxhasa ibango lakho.
Ndinexesha elingakanani lokufaka ibango kwiNgxowamali yeeNgozi zeNdlela?
Umthetho ngokubanzi uthi yiminyaka emi-3 (isithathu) kodwa kwiimeko apho umqhubi ebalekile akasimisa isithuthi esibangele ingozi (apho omnye umntu obandakanyekayo engaziwa), eli xesha lincitshiswa libe yiminyaka emi-2.
Ndilifaka phi ibango leNgxowamali yeeNgozi zeNdlela?
Umhlobo weNgxowamali yeeNgozi zeNdlela (RAF Büddy) ucebisa ngamandla ukuba usebenzise inkampani yezomthetho enegama elihle, kwaye nazi iinkcukacha zendawo apho iNgxowamali yeeNgozi zeNdlela ifumaneka khona:
Idilesi kaNdlunkulu: 38 Ida Street, Menlo Park, Pretoria
Idilesi yePosi: Private Bag x2003, Menlyn, 0063
Umnxeba: (012) 429 5000
IFeksi: (012) 429 5500
IZiko lokuTsalela uMnxeba: 0860 23 55 23
Ndingawafumana phi amaxwebhu okufaka ibango kwiNgxowamali yeeNgozi zeNdlela?
Amaxwebhu/Iifom a(zi)yafumaneka kwiwebhusayithi yeNgxowamali yeeNgozi zeNdlela kule dilesi: https://www.raf.co.za/Claims/Pages/Claim-Forms.aspx
Ndilifumana njani igqwetha leNgxowamali yeeNgozi zeNdlela elinegama elihle?
Kukho amagqwetha anegama elihle ajongene ngokukodwa namabango eNgxowamali yeeNgozi zeNdlela. Ungenza uphando kwikhompyutha, kwaye ucele neengcebiso kwabanye malunga nokufumana elona gqwetha lifanelekileyo elinokunceda – okanye ungaqhagamshelana ngokulula neRAF Büddy ukuze ikuthumele kwinkampani yamagqwetha anegama elihle.
Ndingakwazi ukufaka ibango leNgxowamali yeeNgozi zeNdlela ngekhompyutha?
UMthetho weNgxowamali yeeNgozi zeNdlela usafuna ukuba uwazise ngesandla amaxwebhu ebango kwiNgxowamali yeeNgozi zeNdlela okanye uwathumela ngerejista yeposi.
Ngawaphi amaxwebhu ekufuneka akhaphe ibango lam leNgxowamali yeeNgozi zeNdlela?
Inombolo yetyala evela kwiiNkonzo zamaPolisa aseMzantsi Afrika kunye negama lesikhululo samapolisa esinxulumene nengozi leyo;
Ingxelo efungelweyo yeCandelo 19(f) (echaza ukuba yenzeka njani ingozi);
Amagama kunye neenkcukacha zoqhagamshelwano zamagosa endlela awayejongene nengozi kwindawo eyenzeke kuyo;
Ikopi yeSazisi sakho;
Ingxelo yezonyango efuneka nemiselwe ngokusemthethweni;
Iikopi zeziqinisekiso zokuzalwa apho kubandakanyeka abantwana;
Iziqinisekiso zomvuzo zeenyanga ezi-3 phambi kwengozi;
Iinkcukacha ezipheleleyo zabaqeshi;
Iinkcukacha zabo bonke oogqirha ababandakanyeka kunyango kunye/okanye abasebenzi bezonyango;
Iinkcukacha zawo nawaphina amangqina;
Iifoto zendawo eyenzeke kuyo ingozi;
Iifoto zezithuthi ezibandakanyeka engozini;
Iifoto zomenzakalo obonakalayo;
Ii-akhawunti zeendleko zokungcwaba ezixeliweyo;
Iindleko zonyango ezixeliweyo;
Iinkcukacha zeNkxaso yezoNyango.
Ndingabanga ntoni kwiNgxowamali yeeNgozi zeNdlela?
Iindleko zonyango zexesha elidlulileyo nexesha elizayo, ukulahlekelwa yingeniso okanye ilahleko kwezoqoqosho, ukulahlekelwa yinkxaso, iindleko zomngcwabo ezisikelwe umda, kunye *nomonakalo ngokubanzi.
*Kufuneka ofaka ibango aphumeze iqondo elingama-30% omenzakalo woMntu oPheleleyo okanye phantsi “koVavanyo lweBali” (“Narrative Test”) (umonakalo ngokubanzi awusoloko usaziwa kwaye kufuneka ungqinwe).
Luthini ulwazi ekufuneka luqokelelwe kwindawo yengozi ngeenjongo zokufaka amabango kwiNgxowamali yeeNgozi zeNdlela?
Iinkcukacha zomnye umqhubi kangangoko unokuzifumana. Iinkcukacha zamangqina kangangoko unokuzifumana, iinombolo zezazisi, iinombolo zeminxeba, iidilesi, njalo njalo. Iifoto zokuma kwezithuthi. Iifoto zomonakalo wazo zonke izithuthi. Iinkcukacha zamagosa endlela okanye amapolisa ebesebenza kwindawo yengozi. Amagama kunye neenkcukacha zabasebenzi beenkonzo zikaxakeka.
Ndilifaka njani ibango lam ukuba akukho ofisi yeNgxowamali yeeNgozi zeNdlela ekufutshane nalapho ndihlala khona?
Ibango lingathunyelwa kwezona ofisi zeNgxowamali yeeNgozi zeNdlela zikufutshane ngerejista yeposi. Iphetshana elingqina ukuposwa ngerejista elinesitampu sasePosini somhla liza kuba bubungqina bokufakwa kwebango.
Abaluleke kangakanani amangqina ukungqina ngebango lam kwi Ngxowamali yeeNgozi zeNdlela?
Amangqina ayinxalenye ebaluleke kakhulu yenkqubo yamabango, kwaye abafakimabango banoxanduva lokungqina ukuba umboneleli ngengeniso oyintloko yekhaya ibingungeye yedwa unobangela wengozi. URAF Büddy ucebisa ukuba uzame ukufumana iinkcazelo kumangqina kwakamsinyane kangangoko unako kuba abantu bayafuduka okanye bangabi namdla wokunceda ekuhambeni kwexesha.
Ndingakwazi ukufaka ibango lomonakalo wesithuthi sam kwiNgxowamali yeeNgozi zeNdlela?
INgxowamali yeeNgozi zeNdlela ayiwuhlawuli umonakalo wesithuthi sakho, isithuthuthu, ibhayisekile okanye nazo naziphina izinto ezonakeleyo engozini.
Ingaba intlawulo yebango leNgxowamali yeeNgozi zeNdlela itsalelwa irhafu?
Iintlawulo zamabango eNgxowamali yeeNgozi zeNdlela azitsalelwa rhafu.
Ihlawula malini iNgxowamali yeeNgozi zeNdlela?
Ibango ngalinye lilodwa kuba alifani namanye kwaye iintlawulo nazo ziza kwahluka. Ngokwengxelo yoNyaka 2020 yeNgxowamali yeeNgozi zeNdlela, umyinge wentlawulo ohlawuliweyo ngebango ngalinye ubuli-R138, 010, R826, 007 ebengumyinge wentlawulo yokulahlekelwa yingeniso, R482,291 ebengumyinge wentlawulo yomonakalo ngokubanzi, ize R18 568 libe ngumyinge wentlawulo yezonyango. Kuxhomekeke kwimeko, imbuyekezo enikezelwayo ingaba ngaphezulu okanye ibe ngaphantsi.
Ingaba iNgxowamali yeeNgozi zeNdlela iyazihlawula iindleko zomngcwabo?
Kusekwe umda ngokuphathelene neendleko zokungcwaba okanye ukutshiswa komzimba. Amatye ezikhumbuzo kunye nezinye iindleko zokungcwaba ezifana neentyatyambo, amaphetshana kunye nako nakuphina ukutya neziselo AZIQUKWANGA.INgxowamali yeeNgozi zeNdlela iza kuhoya kuphela ii-akhawunti ezixeliweyo. Ngumntu ohlawule ezi ndleko kuphela onokufaka ibango.
Ithatha ixesha elingakanani inkqubo yeNgxowamali yeeNgozi zeNdlela ukuhlawula ibango?
Imbuyekezo ihlawulwa kwiintsuku ezili-180 ukususela kumhla wokuthathwa kwesigqibo malunga nentlawulo yebango okanye umhla womyalelo wenkundla.
Zintoni endinokukhetha ukuzenza ukuba ndidinga ukufumana imali phambi kokuhlawulwa kwebango?
Soloko ukhumbula ukuba imali-mboleko ixabisa kakhulu. Ukuba udinga imali, eyona nto unokuyenza kukuxoxa nabahlobo nosapho ubone ukuba bangakunceda kusini na. Ukuba oko akwenzeki, ungacinga ngokuthetha nebhanki yakho ukhangele ukuba ukulungele kusini na ukufumana imali-mboleko.
Ukuba ezi zisombululo zingentla azifumaneki kuwe, ungaphanda ngokufaka isicelo semali-mboleko enikezelwa kumntu olindele ukufumana imali kwinkampani enegama elihle.
Qhagamshelana noBuddy akuthumele kwinkampani enegama elihle yemali-mboleko enikezelwa kumntu olindele ukufumana imali.
Ukuba le mibuzo esoloko ibuzwa qho ayiwuphenduli umbuzo wakho, nceda ufake umbuzo wakho kuthi ngqo ukuze sikuphendule kwakamsinyane kangangoko sinako.